3 · IArtemis Seafront-Luxurious Apts 3
Petres, GR, Crete, Greece
Iiflethi zanamhlanje kunye nezitofotofo ze-4, ezinombono womlingo wolwandle lwaseKretan. Yonwabela imfihlo yasePetres beach kunye neencasa zemveli zeMimi's Tavern yethu, kumgama weemitha nje!
Ijikelezwe lulwandle kunye neentaba, iArtemis Seafront Apartments ikunika indawo yokuhlala ezolileyo neyimfihlo, ePetres, 10 km ngaphandle kweRethymno, 29 km ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya saseChania. Ngaphakathi kwendawo, isikhululo sebhasi siya kukusa kunye nokusuka eRethymno, eChania naseHeraklion.
I-Apartment 3 inamagumbi amabini, kuquka igumbi elinye elinebhedi ephindwe kabini kunye negumbi lokuhlala elineebhedi ezimbini zesofa. Igumbi lokuhlambela elinye kunye nekhitshi elinye elinezixhobo zekhitshi ezibalulekileyo. Kukho iingcango ezimbini zebalcony, enye isuka kwigumbi lokulala ekhokelela kwibalcony ejonge elwandle, kwaye enye isuka kwigumbi lokuhlala ekhokelela kwithambeka elijonge kwicala lendlu enolwandle kunye nentaba.
IApartment 3 inokuba nebhedi eyongezelelweyo. Ukuba ufuna ibhedi eyongezelelweyo okanye ibhedi yomntwana nceda usazise njengoko usenza ugcino, kwaye siyakuqinisekisa ngoko nangoko ukuba kunokwenzeka.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Petres, GR